Ku rakibida gvSIG Mobile - Geofumadas
Ku xiridda gvSIG Mobile
Sebtember, 2011 GPS / Qalabka, GvSIG
Isla markiiba waxaan ku xiray gvSIG Mobile on a Mobile Mapper 100, oo tixgelinaya in ay ahayd markii iigu horeysay iyo sanadka intiisa kale waxaan u maleynayaa in aan ka faa'iideysanayo khibradda, waa ku habboon tahay in aan qoro sidii aan sameeyay, si ay dadka kale u siiyaan wax yaryar (glandes).
1. Waa maxay nooca
Hannaanku wuxuu la mid yahay qalab kasta oo gvSIG Mobile oo ku socda Windows Mobile PDA 5 ama ka sareeya. Hase yeeshee, tixraaca, waxaan isticmaalayaa:
Windows Mobile 6.5 Professional, oo leh CE OS 5.2.21895
Tan waxaa lagu xaqiijiyay Bilowga / Dhibaatooyinka / Systen / Ku saabsan
Marka la eego gvSIG, waxaan ku rakibayaa 0.3.0 Build 0275 iyo sababtoo ah Waxaan rabaa in aan Java ku dhufto si dhab ah, Waxaan ku dhejin doonaa mishiinkan (JVM) inkastoo ay sidoo kale suuro gal tahay PhoneME.
2. Soo deji barnaamijyada
Si aad u soo dejiso gvSIG waxaan ku sameeyay boggan:
Taasna waxaan heleynaa feyl loo yaqaan gvSIG_Mobile_Pilot-0.3-WMX-forJ9.cab
Waqtigaas waxaa jiri kara version cusub, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa inaad hubiso xiriirkaan:
Waxaan doortay gvSIG_Mobile_Pilot-0.3-WMX-forJ9.cab, ka digtoonow in warkan aan horay loo baahnayn (mishiinka farsamada), waa mid naxariis badan sababtoo ah ka hor. Laakiin waxay yihiin cawaaqibyo aan horey u fileynay ka dib isbedelka siyaasadda ee ku dhacay Java ka dib Oracle wuxuu iibsan doonaa SUN.
Sidaa darted, waxaad u baahan tahay inaad soo dejiso mashiinka farsamada oo loo yaqaan J9. Xidhiidhada qaarkood ee liisaska ayaa jaban, oo ay ku jiraan http://www.cs.kuleuven.be/~davy/phoneme/downloads.htm taas oo ka muuqda gvSIG Buugga gacanta, sidaa daraadeed waxaan soo jeedin doonaa tan si aad u soo dejiso J9:
kiniin hooseysa waxaa loo yaqaannaa J9.zip, taxaddar marka decompressing, waa in aad doorato "halkan soosaaray" oo aan "oo jiidhi si aad J9 \_" maxaa yeelay taasi waxay abuuri doonaa folder kale loo yaqaan J9 ka dibna waxaan ku siin karaan kartaa.
Ugu dambeyntii waa in aan ka filanno in wixii aan ka go'nay noqon doonaa qaab "J9 \_ PROJ11 \_ bin ..."
3. Ku dhaji barnaamijyada moodada Mobile-ka
version ee Windows Mobile Yimid Mapper Mobile ka 100 (iyo guud ahaan for PDA kasta) sida caadiga ah qaadan labo ka mid ah dhibaatooyinka yar si loo soo dajiyo aad ActiveSync, had iyo jeer, sababtoo ah eedeysanuhu la dhisay on Flash Player oo mararka qaarkood, gaar ahaan Windows 7 ma wuxuu aqoonsanayaa casriyeynta hadda jirta ama ma oggola inuu ku xiro codsiyada aan taageerada lahayn. Laakiin taasi waxaa lagu xalinayaa iyadoo si toos ah looga soo iibsanayo bogga Microsoft, ee xulashada soo dejinta ee aaladaha mobile.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in aan ka arki karno qalabka kombiyuutarka ee ku xiran, haddii kale waa inaan u gudbinnaa iyada oo loo marayo SD-ka.
Waxaa jira laba waxyaalood oo keliya oo lagu dhejiyo:
-Waxaa file gvSIG_Mobile_Pilot-0.3-WMX-forJ9.cab, taas oo ku rid gal ah, haddii ay taasi aan qabanayo ee lagu magacaabo "Data Aplication" ah. Waxaan ku talinaynaa in aad halkaas ku sameeyo, si ay u raaci karaan tallaabo this by barashada tallaabo.
- Faylka loogu yeero J9, oo aan si toos ah ujirnaa xididka. Marka aan tixraacayo asalka, waxay la macno tahay in galka J9 waa in uu ahaado mid isku mid ah sida faylasha kale sida Data Codsiga, ConnMgr, Windows, iwm.
Tani waxay ka dhigaysaa mashiinka wanaajinta Java inuu diyaar u noqdo.
4. Ku rakib gvSIG
Si aad u rakibto gvSIG, waa inaad tagtaa feylka aan ku fayl gareeyno faylka.
Tani waxaa la sameeyaa Start / Explorer, ka dibna ku jira emulator browser ah waxaan raadineynaa faylka "Data Application", waana in aan aragnaa feylka. Iyadoo hal guji, barnaamijku wuxuu bilaabmaa habka rakibidda; Haddii ay jirtey wicii hore, waxay noo sheegi doontaa in la bedeli doono. Waa inaad doorataa inaad ku rakibto qalabka (qalabkeyga) oo aan ku jirin kaarka dibadda (Kaarka Kaydinta).
5. Eegutar gvSIG
Si aan u fulino, waxaan dooranaa "Bilow" iyo guddiga muujinaya codsiyada gvSIG Mobile waa inuu mar hore noqon lahaa.
Astaanta ayaa la riixay, natiijadaasna waa in la soo saaraa dhowr ilbiriqsi kadibna barnaamijka isdhexgalka.
6. Dhibaatooyinka caadiga ah
Marka hore, haddii uusan barnaamijku kicin (Tallaabada 5), ama ka tagto farriin qaldan ee Windows Mobile, waxa muhiim ah waa in la ogaado waxa faylka loo yaqaan g_mobile_launch_log.txt, taas oo ku jirta gvSIGMobile. Xaaladda ugu fiican, waa inaad farriin farriin ka bixisaa sidan:
gvSIG faylka logu soo rogo moobiilka:
Fure gvSIG ugu weyn: gvSIGMobile:
Hubinta haddii J9 uu yahay xidid ...
Qaadista, caawinta = 1
Goobjirnimada, marka hore = 3
Isku-jaridda, Resp = J9
J9 Waddo la jaray: \_ J9
Qorista faylka start.opt ee wadooyinka wanaagsan ...
Qodobbada lagu bilaabayo ...
J9 waddada: \_ J9 \_ PPRO11 \_ bin \_ j9w.exe
GvSIG mobile waxaa la bilaabay si guul leh.
Iyada oo ku saleysan fariinta, waxaad ka arki kartaa meesha ay dhibaatadu tahay. Tani waa tusaale, sida caadiga ah, maxaa yeelay, iyagu ma ay gelin folder J9 ah, arko in nidaamka baadhaa macquul ah si aad u ogaato buugga xididka, sida raadinaya haddii lagu rakibay on kaarka SD ama haddii la rakibay PhoneME:
Raadinta jidka kaadhka sd ...
Joogitaanka '' J9 \_ PPRO11 \_ bin \_ j9w.exe 'ee xididada ...
Waad heshay waddada SD card: \_ "Disk Storage"
La helay SD kaadh:
Fayl aan la helin: '\_ J9 \_ PPRO11 \_ bin \_ j9w.exe' mid kasta oo ka mid ah kaararka 2 SD.
Lama ogaan karin kaarka sd, J9 lama helin!
Hubinta haddii PhoneME uu yahay xidid ...
Joogitaanka '' phoneme \_ personal \_ bin \_ cvm.exe 'ee xididada ...
Fayl aan la helin: '\_ phoneme \_ personal \_ bin \_ cvm.exe' mid ka mid ah kaararka SD-ka 2.
Awood ma helin kaarka sd, PhoneME lama helin!
Awood ma leh in la bilaabo gvSIG Mobile. Waxaa dhici karta inaysan jirin JVM.
Ha iloobin, liiska boostada gvSIG, sababtoo ah sida caadiga ah qof ayaa horay u dhacay oo jawaabta ayaa jira. Haddii kale, boostada fudud ee liiska ayaa ka jawaabi doonta bulshada si waxtar leh.
Haddii aanan ... Dhammaan dhegaha ayaan ahay ...
Post Previous«Previous Joornaalada 3, 10 geofumadas cusub ee bisha Agoosto
Post Next sawiirrada xiriira Post dhalin sawiirrada iyo pluginsNext »